solosaina sy Internet | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: solosaina ary Internet
Power Bank - inona izany? Banky famokarana herinaratra
Posted on 15.09.2019 08.01.2020
Miasa haingana amin'ny bateria ny asa mavitrika amin'ny fitaovana. Betsaka ny olona no nahita bateria maty tamin'ny fotoana tsy nety indrindra. Mampalahelo fa tsy manana fidirana amin'ny outlet na charger foana ianao. Ahoana ...
Fankasitrahana tanana. Inona avy ireo fandaharana hanampy an'izany?
Indraindray ny tompon'ny solosainanao manokana dia miatrika asa somary sarotra - ny fandikana ny lahatsoratra an-tanana amin'ny endrika nomerika. Mazava ho azy, azonao atao ihany koa ny manao an'io tanana io. Na izany aza, ity fomba ity dia mifandraika ...
Minecraft: sabatra. Ahoana ny fomba enchant sabatra amin'ny Minecraft
Raha vao miseho eo amin'ny tontolon'ny Minecraft ianao dia tsy manana na inona na inona. Tsy maintsy mahazo ny loharano voalohany amin'ny tananao ianao ary, miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, mamorona ny fitaovana voalohany izay ...
Milalao amin'ny valiny izahay, na Ahoana no fomba hamonoana ireo filàna ao amin'ny The Sims-3?
Inona no tadiavin'ny olona? Azo valiana amin'ny fomba samihafa ity fanontaniana ity, saingy mbola tsy feno ny valiny rehetra. Satria ve samy hafa daholo isika? Tsia, satria ny tanjona iraisana dia manerantany loatra ... Ny zava-drehetra ...
Ahoana ny fampiasana coupon amin'ny Aliexpress: torolàlana miantsena
Izay mahalala momba ny sehatra varotra toy ny Aliexpress dia afaka mitahiry be amin'ny fividianana. Ho an'ny vokatra maro amin'ity tranokala sinoa ity dia efa ambany lavitra noho ny vidin'ny tsena ny vidiny. Betsaka no efa ...
"The Witcher 3": fitsangatsanganana. "Treasures of Count Royven", fitadiavana tantara
The Witcher 3 dia RPG nahagaga ny rehetra tokoa. Mazava ho azy, ny sangan'asa voalohany sy faharoa amin'ny tetikasa dia efa sangan'asa, fa ny fahatelo kosa nivadika ho tsara kokoa, nanome fahalalahana hanao hetsika lehibe tamin'ny ...
Inona no atao hoe teletype amin'ny finday?
Ny mpampiasa telefaona sasany, izay misitrika ao anaty fikirana, dia mahita ny fanafohezana tsy takatry ny saina TTY na ilay andian-teny hoe "Teletype mode". Ary koa, ny kisary mampiavaka azy dia mety misy eo amin'ny tsangan'ny finday avo lenta. Inona no atao hoe TTY amin'ny telefaona? Hatao inona…
Ahoana ny fametrahana Google Chrome amin'ny solosaina. Torolàlana ho an'ny vao manomboka
Mety ho gaga ianao, saingy androany tsy ny mpampiasa rehetra no mahay mametraka Google Chrome amin'ny solosaina, ary na dia teo aza ny zava-misy fa ity browser ity dia izy no mpitarika tsy voadinika eo ...
Zavatra manaitra sy takian'ny rafitra ho an'ny Crysis 3
Crysis. Mbola betsaka noho izany ny teny hoe shooter. Ity lalao ity dia mahazo anaram-boninahitra hatrany amin'ny sokajy "Best Graphics". Ny ampahany vaovao dia mametraka ny bara manaraka izay tarihin'ny tsirairay ...
Ahoana ny fomba hamatsiana kaonty PayPal amin'ny alàlan'ny Qiwi
Haingam-pandeha ny varotra Internet, ary maro ny mpandraharaha Rosiana maoderina amin'ny Internet no manandrana tsy handrakotra ny tsena anatiny fotsiny, fa koa hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa vahiny. Mazava ho azy fa izany dia mitaky fahaizana tsy hampiasa fandoavambola amerikanina ...
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny "Maila": torolàlana ho an'ireo vao manomboka
Posted on 15.09.2019 10.01.2020
Androany dia hianarantsika ny fisoratana anarana amin'ny Mail. Amin'ny ankapobeny, ho an'ireo mpampiasa mandroso, tsy misy sarotra amin'ity raharaha ity. Ankoatr'izay, izy ireo ihany dia afaka manazava ny fitsipiky ny fisoratana anarana amin'ny olona rehetra, ary koa manampy ...
Fomba 100% hanesorana ny poketra "QIWI"
Afaka mahita hevitra an-tapitrisany amin'ny rafitra fandoavam-bola QIWI amin'ny Internet ianao. Ary tsy ny rehetra no miabo, na eo aza ny fomba fisoratana anarana tsotra. Ny fanontaniana malaza indrindra sy farany ataon'ny mpampiasa dia ny hoe "Ahoana ...
Ny motera fikarohana alemà tena fahita indrindra
Ao amin'ny faritanin'ny firenentsika, ny mpitarika eo amin'ny milina fikarohana dia azo antsoina hoe tetik'asa anatiny "Yandex", izay iadian'ny orinasa iraisam-pirenena "Google" ny zon'ny primatiora. Andao hojerentsika hoe manao ahoana ny faritra amin'ity faritra ity ...
Skrimer: inona izany?
Raha adikao ara-bakiteny io teny io amin'ny teny anglisy dia midika hoe "mpiantsoantso" izany. Andao hiezaka ny hanamora ny fanazavana. Screamer - inona izany? Amin'ny ankapobeny, ireo dia horonan-tsary miaraka amina fivoaran-javatra mitovy amin'izany. Voalohany amin'ny ...
Iza no tsara kokoa - PS3 sa Xbox 360? Mitady valiny
Eny, nanangona vola ihany izahay tamin'ny farany ary vonona hanatanteraka ny nofinay taloha ary hividy console lalao tsara! Vonona ny hiroboka ao anatin'ny tontolon'ny lalao mahavariana sy manaitaitra isika ary hanolo-tena ho azy ...
Atody paska amin'ny lalao - inona izany? Atody Paska miaraka amin'ny lalao Outlast, Minecraft ary GTA-5
"Atody paska" no anarana slang an'ny "atody paska" amin'ny lalao, sarimihetsika, rindrambaiko. Ity dia karazana tsiambaratelo, ny atiny izay tsy mifanaraka amin'ny atiny ankapobeny, dia toa tsy mampihomehy, mampihomehy ary matetika kokoa ...
Fanentanana fanampiny ho an'ny Warcraft 3: seza misy lavaka. famaritana
Fanentanana fanampiny ho an'ny Warcraft 3: ny seza fiandrianana be sandry dia nanomboka nipoitra avy hatrany taorian'ny famoahana ny lalao voalohany. Na dia afaka folo taona aza, dia mbola malaza foana izy ireo. Ny fanentanana dia noforonin'ny mpankafy sy ny orinasa mpanao lalao. ...
Ahoana ny fomba handrarana olona iray ao amin'ny VKontakte: mianatra manao "lisitra mainty"
Androany izahay hiresaka aminao momba ny fomba fandrarana olona iray ao amin'ny VKontakte. Ary andao isika hiezaka hamantatra aminao izay homen'ity asa ity antsika. Tsy ho be loatra ny manarona amin'ny saina ...
"Logo USSR" - ny fitsipiky ny lalao
Posted on 15.09.2019 20.11.2019
Raha tompon'ny fitaovana finday mihazakazaka amin'ny OS Android ianao dia azonao atao ny misintona karazana rindranasa, anisan'izany ny lalao, mihoatra ny indray mandeha. Androany izahay dia nanapa-kevitra anao ...
Inona no anaran'ilay programa ho famoronana fandaharana? Famaritana ny programa momba ny famoronana fanolorana
Rehefa mametraka ny fanontaniana hoe inona ilay programa iantsoana ny famoronana fampisehoana, ny ankamaroan'ny olona dia tsy isalasalana fa manana fikambanana amin'ilay programa PowerPoint malaza avy amin'i Microsoft. Natao hamoronana fitaovana ho an'ny ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 949 Next Page
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,444.